SONATA-CANTATA: January 2010
မိမိအနေဖြင့် “အူမ တောင့်မှ သီလစောင့်တယ်” ဆိုသည့် စကားကို သဘောမကျ။ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်မှုအား စားဝတ်နေရေးကို အကြောင်းပြကာ ဆင်ခြေပေးတတ်ကြ၍ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အူမ တောင့်ပါလျှက် သီလမစောင့်ပဲ ၀ိသမလောဘ နောက်လိုက်နေတတ်ကြ၍ ဖြစ်သည်။
ဤဆိုရိုးစကား၏ မူရင်းဇစ်မြစ်ကို သေချာ မသိ။ သို့သော် စက္က၀တ္တိသုတ်ကို ကြည့်၍ ရှေးလူကြီးများက ပြောဆိုရေးသားခဲ့ကြသည်ဟု ထင်သည်။ နောင်တွင် မာ့က်စ်ဝါဒလွှမ်းမိုးသော ကွန်မြူနစ် ဆိုရှယ်လစ်တို့ကြောင့် ပို၍ အသုံးတွင်ခဲ့ဟန် ရှိ၏။ စက္က၀တ္တိသုတ်အရ စကြ၀တေးမင်းတို့တွင် (၁) ပြည်သူပြည်သားတို့အား တရားနှင့်အညီ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရခြင်းနှင့် (၂) စားဝတ်နေရေး ချို့တဲ့သူများအား ငွေကြေးဥစ္စာထောက်ပံ့ပေးရခြင်းဟူသော တာဝန်ဝတ္တရားနှစ်ပါးရှိသည်။ အကယ်၍ ဒုတိယတာဝန်ဖြစ်သော ထောက်ပံ့မှုပျက်ကွက်ပါက ဆင်းရဲမွဲတေမှုသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာမည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ကျယ်ပြန့်လာပါက ခိုးယူခြင်းအစ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု ထူပြောလာမည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုကို အချိန်မီ မကုစားပါက, သို့မဟုတ် ကုစားနည်းမမှန်ပါက ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုအပြင် အကြမ်းဖက်မှုများပါ တိုးပွားလာမည်။ ဤကား စက္က၀တ္တိသုတ်မှ စီးပွားရေးနှင့် ကိုယ်ကျင့်သီလတို့ဆက်နွယ်ပုံဖြစ်သည်။
စီးပွားရေး အရင်းခံပြဋ္ဌာန်းမှုသဘော(economic determinism) ကို ယုံကြည်သည့် မာ့က်စ်ဝါဒအရ စီးပွားရေးသည် အခြေခံ အဆောက်အအုံဖြစ်၍ အသိပညာ, ကိုယ်ကျင့်တရား, ယဉ်ကျေးမှုတို့သည် စီးပွားရေးပုံစံပေါ်တွင် မှီတည်နေသော အပေါ်ထပ် အဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ “အူမ တောင့်မှ သီလစောင့်တယ်” ဟူသောစကားအား စီးပွားရေး အရင်းခံပြဋ္ဌာန်းမှုသဘောကို ဖော်ညွှန်းသည့် ဆောင်ပုဒ်အဖြစ် တွင်တွင် သုံးခဲ့ကြဟန်တူသည်။
စီးပွားရေးသည် လူ့ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အခြေခံမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သည်ဟူသော အချက်ကို လက်ခံသည်။ သို့သော် ကိုယ်ကျင့်သီလသည် ထိုအခြေခံတစ်ခုတည်းပေါ်တွင် ရပ်တည်နေသည်ဟု ယူဆခြင်းသည် မိမိတို့၏ “လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်” ကို ငြင်းပယ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်, မြေရှင်စနစ်, အရင်းရှင်စနစ်စသော စီးပွားရေးပုံစံပေါ်တွင်တည်၍ လူတို့ စဉ်းစားတွေးခေါ် ပြုမူကျင့်ကြံတတ်ကြသည်ကို လက်ခံသည်။ သို့သော် လူတို့၏ အတွေးအခေါ်ဓလေ့စရိုက်များနှင့် လူ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အောင်မြင်မှုကို စီးပွားရေးတစ်ခုတည်းကသာ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်မဟုတ်။ အခြားသော အချက်အလက်များစွာကလည်း လွှမ်းမိုးထားပါသည်။ ထိုအထဲတွင် ကိုယ်ကျင့်သီလသည်လည်း (စားဝတ်နေရေးနှင့် စီးပွားရေးတို့ထက် မလျော့ပဲ) အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကျင့်သီလ ပျက်ပြားသော လူ့အဖွဲ့စည်းတွင် စီးပွားရေးအခြေခံကောင်းများ ဖြစ်ထွန်းလာရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ စီးပွားရေးနှင့် ကိုယ်ကျင့်သီလသည် လူ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်း၏ အခြေခံမဏ္ဍိုင်နှစ်ခု (the twin pillars of civilization) ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် “အူမ-တောင့်မှ သီလစောင့်တယ်” ဟူသောစကားအား လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော “ရေစုန်သဘော” အဖြစ်လက်ခံသော်လည်း၊ လူတစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းစီ အနေဖြင့် လိုက်နာကျင့်သုံးထိုက်သော ထုံး, ဆင်ခြေပေးထိုက်သော စကားအဖြစ်မူ လက်မခံနိုင်ပါ။
၁။ ဒီဃနိကာယ်၊ ပါထိက၀ဂ်၊ စက္က၀တ္တိသုတ်
၂။ Gold, The Golden Rule and Government: The civil society and the End of the State – D.G. White.
ရှေ့လူကြီးတွေကတော့ ပြောကြတာပဲ ခေတ်ကြီးကတော့ တနေ့တခြား ဆိုးဝါးလာလိုက်တာ တဲ့
မသီတာတောင် ငါ့တသက် ခေတ်ကောင်းလေးမှ မှီပါဦးမလားလို့ သံယောင်လိုက်ချင်ချင်
အဲ ဒါပေမဲ့ သတိထားမိတာလေးတခုက
မသီတာတို့ မမွေးခင် တခေတ်တခါက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ နိုက်ကလပ် ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု
မသီတာတို့ ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းခေတ်မှာတော့ အဲ့ဒါက အတော်လေး မှေးမှိန်ခဲ့တယ်
အခုများတော့ “ရိုးတလျှောက် ဖြိုးမောက်ပါတဲ့ လယ်ပတူ” ဆိုတာလို
လမ်းတလျှောက် ပေါလိုက်ပါတဲ့ နိုက်ကလပ်… ပြန်လည်ဆန်းသစ်လာလိုက်တာ
ဟူး…တော်ပါသေးရဲ့…မသီတာတို့ သီသီလေး လွဲခဲ့ပေလို့
နို့မို့ရှိ ကိုဧရာတယောက်ကို ဘယ်နိုက်ကလပ် လိုက်ဖမ်းရမယ်မှန်း မသိ...
လုသည်လည်းမဟုတ် လူးသည်လည်း မဟုတ်လား
လူဆိုတာ သိပ် fragile ဖြစ်တယ် တဲ့
သေဆုံးချိန် မတိုင်မီအထိ ဘ၀ တခုပေါ့…
ရှင်းရလွယ်အောင် delta လုပ်လို့ အသေးခြုံ့လိုက်မယ်။
မသေသေးတဲ့ ငါ နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ငါ့ဘ၀ တခု။
လေးလံနေတယ် ပေါ့ပါးနေတယ်ဆိုတဲ့ ငါ့စိတ် တခုလည်း ရှိတယ်။
ငါပါလို့ လက်ညှိုးထိုးပြလို့ရတဲ့ ငါ့ရုပ်ကြီး တခုလည်းရှိတယ်။
nested loops တွေလိုပဲ ရှုပ်ထွေးလာပြန်တယ်။
နေပါဦး သင်က ရှုပ်ချင်တာလား ရှင်းချင်တာလား…ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးမိတယ်။
သေချာတာကတော့… ငါ ထွက်ပြေးလာခဲ့မိတယ်…
ဒီနေ့ တာဝန်အရ ထမင်းဟင်းတောင် ထွေတွေ ထူးထူး ချက်စရာမလိုဘူး။
မနေ့က ချက်ထားတဲ့ ဟင်းတွေရှိနေတယ်။
အော် မနေ့က လုံ့လ ၀ီရိယ ရှိခဲ့ခြင်းရဲ့ အကျိုး ဒီနေ့ ခံစားရတာပဲ…။ အေးအေးဆေးဆေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ချင်တာကို လုပ်နေလို့ ရတယ်။
ဒါဆို ငါက ဒီနေ့ကို ရောက်နေပြီလို့ လက်ခံရမယ်။ ဒါသေချာရင် မနေ့က ငါချက်ထားတဲ့ ဟင်းတွေက ဒီနေ့မှာပါ မပုတ်မသိုးသေးပဲ အလဟဿ မဖြစ်လို့သာ ငါ ဒီလိုနေနိုင်တာ…
အကယ်၍များ တခုခု မှားယွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်…။
ဉာဏ် ပညာ ဆိုတဲ့ အခန်းဘက်က အချက်ပြမီး လင်းတာ သတိထားလိုက်မိသလို မနက်ဖန်ကို သတိရပြန်တယ်။
သေချာတာကတော့ လွတ်လပ်ခြင်းကို လိုအင်လောဘနဲ့ လဲလိုက်ရတယ်။
ကျော်ခဲ့ပါပြီ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် တစုံတခုသော အတိုင်းအတာ ပမာဏအထိလည်း မြင့်မားခဲ့ပါတယ်။
လွတ်လပ်တဲ့လူ လို့တော့ မဆိုလိုဘူးနော်။
ဒါဆို ပစ္စုပ္ပန်မှာ လုံလ၀ီရိယ အကျိုးတွေကို မိန်မိန်ကြီး ခံစားနေတာပေါ့
ခံစားပါတယ်…ကုန်ဆုံးတတ်တဲ့ အရာတွေမို့ အနာဂတ်အတွက် ထပ်မံလည်း ဖြည့်ဆည်းနေရပါတယ်။
နောက် သေချာသေးတာ တခုက
လူဘ၀က လွတ်မှ လူပီသတာ မဟုတ်လား…
၂၀၁၀ နှစ်သစ်ကို SONATA-CANTATA မှ လှိုက်လှဲပျူငှာ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်...